China Capsule Bottle PET Brown ifektri abakhiqizi | Qianduo Okufakiwe
I-Capsule Bottle PET Ebomvu
Ibhodlela le-Capsule PET Green
Ibhodlela le-Capsule PET Brown
Amabhodlela epulasitiki e-PET anendawo ebalulekile yemakethe cishe kuyo yonke imakethe yamakhonteyina okupakisha. Lokhu ngokwemvelo akunakwehlukaniswa nezinzuzo zamabhodlela epulasitiki e-PET. Okokuqala, ukuzinza kwempahla yamabhodlela epulasitiki kuhle, ukumelana namazinga okushisa, ekushiseni okuthile ukugcina ukuzinza kwempahla, ikakhulukazi efanelekela ukupakisha kokudla. Okwesibili, amabhodlela epulasitiki asekhaya avele obala futhi anokufana namabhodlela engilazi, kepha ayakhanya futhi ayantekenteke.
Amabhodlela epulasitiki e-PET anendawo ebalulekile yemakethe cishe kuyo yonke imakethe yamakhonteyina okupakisha. Lokhu ngokwemvelo akunakwehlukaniswa nezinzuzo zamabhodlela epulasitiki e-PET. Okokuqala, ukuzinza kwempahla yamabhodlela epulasitiki kuhle, ukumelana namazinga okushisa, ekushiseni okuthile ukugcina ukuzinza kwempahla, ikakhulukazi efanelekela ukupakisha kokudla. Okwesibili, amabhodlela epulasitiki asekhaya avele obala futhi anokufana namabhodlela engilazi, kepha ayakhanya futhi ayantekenteke. Okwesithathu, amabhodlela epulasitiki asekhaya ashibhile, okulungele ukonga izindleko zokupakisha. Ekugcineni, amabhodlela epulasitiki asezilwaneni anezimo ezahlukahlukene, ezingabumba ubujamo obuhlukahlukene.
Izinzuzo zePET Bottle
UBrown Amabhodlela e-PET alula futhi aqinile, futhi amandla nokuqina kwawo kuphakeme kakhulu kunalokho okwenziwe ngezinye izinto zepulasitiki. Ibhodlela le-polyester lilula futhi liqinile, futhi amandla alo nokuqina kwawo kuphakeme kakhulu kunalokho okwenziwe ngezinye izinto zepulasitiki. Ingamelana nomthelela omkhulu ngaphandle kokulimala. Kufanelekile ukwenza amabhodlela okupakisha izidakamizwa ngodonga oluncane, isisindo esincane namandla amakhulu. Endabeni yomthamo wezidakamizwa ofanayo, isisindo sebhodlela le-PET liyi-1/10 kuphela lelo lebhodlela lengilazi; isisindo sebhodlela le-PET elinobubanzi obufanayo bangaphandle buphinda izikhathi eziyi-1.5 zebhodlela lengilazi. Amabhodlela ansundu abonakalayo noma opha angenziwa ngezinto ezibonakalayo ze-PET.
Umkhiqizi 10cc 50cc 100cc 150cc 250cc 300cc ongenalutho PET PE HDPE Plastic White Opaque Pill Bottle
Ukuhlolwa kwezinto ezibonakalayo
I-Ethylene oxide ibulala amagciwane
Izici zebhodlela elihle le-PET
Imvamisa empilweni yethu yansuku zonke, ukwakheka okujwayelekile kwamathini epulasitiki kuyisikwele, unxande, indilinga, i-ellipse, njll ngokombono wokusebenzisa kwethu, izinzuzo zawo zehlukile. Umzimba webhodlela kufanele wakheke kahle, ngokukhanya okusobala okuphezulu, ngaphandle kwamabhamuza, amabala amnyama, amabala kawoyela, izinto eziqinile, imihuzuko, amasongo aqinile, i-atomization nokwenza mhlophe. Umbala webhodlela elinemibala kufanele ufane futhi ngaphandle kokwehluka kombala okusobala. Ubuso bokugcina bomlomo webhodlela kufanele buthambeke, ngaphandle kokulimala notch, ngemicu ephelele, i-crystallization ephelele, ngaphandle kokuchitheka, ukudweba, ukusonteka namabala kawoyela ngaphakathi nangaphandle. Iphansi lebhodlela kufanele lakhiwe kahle, ngaphandle kokucindezeleka, i-bulge kanye nendawo Ukuvela kwebhodlela leplastiki yezokwelapha eligcwalisiwe alikho ekunciphiseni nasekuguqukeni, ibhodlela eliyicaba, ukuguqulwa kodonga oseceleni, phansi kwe-convex nokudangala. Umkhiqizo unobuso obuhlanzekile, akukho phunga elikhexayo, ukoma, akukho uthuli kanye nebala lamafutha, futhi akukho ukungcola ngaphakathi.
Imibukiso eminingi yezithombe
Langaphambilini I-Capsule PET Blue
Olandelayo: Ibhodlela le-Capsule PET Green
I-Capsule Bottle PET Emnyama
I-Capsule Bottle PET Ephuzi
Capsule Bottle PET okungabonakali
I-Capsule PET Blue